Siyaasada xisbiga kulmiye ma qori isu dhiibaa? Q. 2aad
Thursday October 27, 2016 - 10:43:26 in Somali News by Super Admin
Wakhtigan la joogo oo ah dhamaadka sanadka 2016 bulshada reer somaliland gaar ahaana Gobolka Hawd waxay si dhow ula socdaan sadaasha doorashada lafilayo in ay qabsoonto bilawga sanadka 2017,waa hadii ay dhacdo e
Hadaba qormadan waxaan kusoo qaadanayaa qorshaha xisbiga kulmiye ee ah shimbirayahow heesa heesa iyo dareenka ay qabaan dhalinyada aqoonyahanka ah ee Gobolka Hawd oo ah Dan iyo doorasho.Taas oo macnaheedu yahay in aan maanta la joogin wakhtigii balanqaadka beenta ah. Lakiin Horumar iyo saami qaybsiga awooda xisbigu ay tahay in laga hadlo. Sidaa darteed hadii uu Gudoomiye Muj. Muse bixi la ashqaraaray taashka Galbeed iyo Bari fod ee ku qotoma siyaasada qori isu dhiibka ah ee labada beelood waxaanu aaminsanahay Muse biixi iyo xisbigiisuba inay yihiin isu qabe aan loo qabin!!!
Campaign-ka iyo xusulduubka Guclo orodka ah ee kulmiye iyo xarago socodka siyaasadeed ee bulshada Gobolka Hawd waxay laf jabku tahay Muse biixi waana cod iyo taageero muhiim ah oo uu wayay. Wali waxaa dadwaynaha ku nool Gobolka Hawd xasuus iyo saamayn ku reebay tacabkii ay kulmiye galiyeen iyo xaalada Horumar la’aaneed ee haysata Tusaalle ahaan dhanka Biyaha oo baahi wayn loo qabo Dad iyo Duunyoba iyadoo survey laga sameeyay deegaano ka mida Gobolka lagu cadeeday inay jiraan meelo badan oo biyo laga gaadhi karo, waxaase iswaydiin mudan maadaama oo wadanka deegano badan laga hirgaliyay Qodida ceelbiyoodyo badan maxaa Gobolka Hawd looga